EGD - यो के हो? यो एउटा प्रश्न पहिलो पटक gastroskopistu गर्न जारी थियो निर्देशन मान्छे, धेरै छ। यो पेट, esophagus र duodenum 12 को यो परीक्षा यी शरीर (अल्सर, erosions, candidiasis, आदि ..), कुन रोगी मा चरम पीडा कारण विभिन्न pathologies पहिचान गर्न गरिन्छ कि टिप्पण लायक छ।
EGD - यो के हो?
प्रतिनिधित्व गर्ने गरयो लागि खडा fibroezofagogastroduodenoskopiya जस्तै सुनिन्छ कि एकदम लामो चिकित्सा अवधि। खैर, सर्वेक्षण को यस प्रकार मा एक महत्वपूर्ण कमी लागि मात्र अक्सर प्रयोग गरिएको छ ढक्कन EGD, तर FGS, FEGDS, साथै शब्द "gastroscopy"।
सर्वेक्षण सञ्चालन गरिएको छ? रूपमा
EGD - यो के हो? यो जानकारी बाहिर फेला, धेरै अस्पताल विरामीहरु ठाडै यस्तो परीक्षा undergo इन्कार गर्छन्। आखिर, यो अन्त मा एक क्यामेरा संग लामो ट्यूब को रूप मा एक लचिलो फाइबर-ओप्टिक चिकित्सा उपकरण प्रयोग गरेको छ। त्यो जन्म उनको पहिलो गर्न, क्रमिक को मौखिक गुहा मा, त्यसपछि esophagus मा र अधिक पेट र 12 duodenum मा दिन्छ।
निस्सन्देह, यो प्रक्रिया एकदम रोगी लागि अप्रिय छ। तर समय मा गर्न भने, undiagnosed र फलस्वरूप अनुपचारित रोग हुन भनेर आवश्यकता सर्जरी वास्तै गर्न सक्नुहुन्छ। यो पनि EGD को धारण गर्ने श्लेम लाग्एको झिल्ली को मात्र होइन विशुद्ध दृश्य निरीक्षण प्रदान गर्दछ उल्लेख गर्नुपर्छ पाचन प्रणालीको, तर पनि थप अध्ययन (एक बायोप्सी) को लागि ऊतक को पीडारहित नमूना सानो अंश।
पाचन अंगहरु को कुशलतापूर्वक लुमेन यस्तो सर्वेक्षण पूरा गर्न बिल्कुल मुक्त हुनुपर्छ। यस सन्दर्भमा, रोगी पहिल्यै आवश्यक प्रशिक्षण लागि सरल निर्देशनहरू प्रदान गर्नुहोस्। यसलाई निम्न सिफारिसहरू समावेश गर्दछ:
को पूर्वसन्ध्या मा परीक्षा भारी र indigestible खाना प्रयोग गर्न अघि।
EGD 9-10 हूँ तोकिएको भने, पछि 8 बजे रोगी मनमोहक कुनै पनि खाना (पिउन अनुमति पानी) को प्रयोग इन्कार गर्न।
बिहान अघि परीक्षण कडाई खाना वा पिउन केहि निषेधित छ।
खैर, एक gastroscopy पूरा भएपछि, रोगी पनि दुई घण्टा भित्र खानाको खान सिफारिस गरिएको छैन।
परीक्षण अघि तत्काल तयारी लागि जाँदा, त्यसपछि 1-3 मिनेट रोगी सम्म को लागि EGD एनेस्थेसिया, अर्थात् सिंचाई घाँटी (pharynx), विशेष तयारी, एक endoscope swallowing समयमा संवेदनशीलता मा एक महत्वपूर्ण कमी प्रदान उत्पादन गर्छ। त्यस अवस्थामा, तपाईं औषधि कुनै पनि एलर्जी छ भने, त्यसपछि यसलाई सधैं आफ्नो डाक्टर बताउन पर्छ।
प्रक्रिया पीडादायी छ?
EGD - यो के हो? यो प्रश्नको उत्तर पत्ता, धेरै निम्न बारेमा चिन्तित हुनुहुन्छ: "कसरी पीडादायी प्रक्रिया नै हो?" औसत मा, अध्ययन केही मिनेट लाग्छ। यसलाई आफ्नो बायाँ छेउमा झूट गरेको छ। यस मामला मा, त्यहाँ पोशाक उतार लेना आवश्यक छैन छ। अधिक तनावमुक्त र शान्त भएको सजिलो आयोजित गरिनेछ, प्रक्रिया समयमा रोगी हुनेछ। कहिल्यै यस्तो परीक्षा पास भएकाहरूलाई, यो पीडारहित, तर धेरै अप्रिय छ तर्क।
EGD तपाईं मात्र आफ्नो उपस्थित चिकित्सक (सामान्यतया Gastroenterologist) बताउन सक्नुहुन्छ बनाउन जहाँ बारेमा। नियम, यो त्यहाँ gastroskopist-विशेषज्ञ, र पनि सबै सुसज्जित कार्यालय पूरा जहाँ निजी वा सार्वजनिक अस्पताल छ।
पुरानो गलसुआशोथ व्यवहार कसरी केही सिफारिसहरू
अन्डा कसरी फोडा गर्न, त्यसैले तिनीहरूले साफ छन्? पाक रहस्य
को प्रिपेरेटरी समूहको लागि मार्च को 8 औं मा लिपि: कविता, गीत, प्रतियोगिताहरूमा
Hochosterwitz महल: विवरण, इतिहास, यात्रा
"400 खराब अनुरोध" पहुँच त्रुटि: यो के हो र कसरी स्थिति समाधान गर्न?
डच आइरिस bulbous: रोपण र मर्मतका, सुविधा र समीक्षा